shaqaalaha' warbixin xuquuqda dadka qaxootiga ah & waddanka u soo guurey | Refugee Center Online
Marka aad shaqo u hesho, inaad leedahay xuquuq gaar ah si aad u ilaaliso goobta shaqada. In USA, qof kasta waa in si cadaalad ah loola dhaqmo. Your Tababaraha waa in ay raacaan sharciyada ama isaga / iyada la ganaaxi doono ama ciqaab sharciga. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan shaqaalaha bartaan’ xuquuqda ee USA.
Xukuumadda Maraykanka ayaa shaqaalaha’ sharciyada xuquuqda yidhaahda inta lacag ee waa inaad. Waxaa kaloo jira sharciyo ku saabsan inta saacadood ee aad shaqayn karto iyo sida aad u shaqayso aad daawaynaya. Cidda aad u shaqayso waa in ay siiyaan meel ammaan ah oo caafimaad qaba si aad u shaqeeyaan. Haddii isagu ama iyadu ma, in iyaga la ciqaabaa kartaa sharciga.
mushaharka ugu yar
Xukuumadda federaalka saara shuruucda dalka oo dhan. Dawladaha Dawladdu waxay sameeyaan sharciyada ee dalalka ay. Xukuumadda federaalka iyo gobol kasta ayaa ka dhigay mushaharka ugu yar. mushaharka ugu yar waa lacagta ugu yar ee loo shaqeeyayaashu waa inay bixiyaan shaqaalaha. mushaharka ugu yar Federaalka waa $7.25 saacadiiba. Taas macnaheedu waa in shaqo-meel kasta oo Maraykanka WAA ugu yaraan aad bixiso $7.25 saacadiiba.
State mushaharka ugu yar
Mararka qaarkood mushaharka ugu yar gobolka uu ka badan yahay mushaharka ugu yar ee federaalka. Tusaale ahaan, gobolka California ayaa mushaharka ugu yar ee $8.00 saacadiiba. Arizona ayaa mushaharka ugu yar ee $7.65 saacadiiba. In dalalka kuwan, shaqeeyayaashu waa inay bixiyaan shaqaalaha qadarka sare.
|Ogow waxa mushaharka ugu yar waa in aad gobolka
|Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shaqaalaha’ xuquuqda iyo lacagta luqado badan
mushaharka ugu yar iyo talooyin
Talooyin waa lacag ka macaamiisha in ay ku mahadsantahay inaad adeeg. Talooyin kuma jiraan in lacagta cuntada ama canshuurta. Haddii aad ka shaqayso maqaaxi ama shaqo halkaas oo aad ka heli talooyin ka badan $30 bil ah, markaas waxaad la shaqeeya karaa sida a “shaqaale saadaaliyay.” shaqaalaha saadaaliyay waa in la siiyo ugu yaraan $2.13 saacadiiba oo lagu daray talooyin ay. Talooyin waa in ay ahaadaan ka badan $5.12 saacaddii si aad weli ku muteystay mushaharka ugu yar ee federaalka $7.25 ($2.13 + $5.12 = $7.25). Waxaa jira qaar ka mid ah maqaayadaha ay ka mid yihiin caarada in biilka. Marka aad soo kiraystay, aad Tababaraha kuu sheegi doonaa xeerarka ku saabsan tankeeda. Waxa aad war dheeraad ah oo ku saabsan ka akhriyi kartaa xeerarka shaqaalaha saadaaliyay halkan.
Wadamada qaarkood, rag iyo dumar lagu siiyo si ka duwan. Si kastaba ha ahaatee, US sharciyada hana u oggolaan in this. Haddii aad shaqo la mid ah sida a co-worker, waa in aad la bixiyo isku mid. Sidoo kale waa inaad hesho mushahar la mid ah saacadaha dheeraadka ah, saacadood vacation, iyo gunooyinka. Shaqaaluhu waa inay ka badan u hesho oo kaliya haddii ay yihiin boosas kale duwan ama samayn dheeraad ah oo meel isku mid ah. Waxay sidoo kale la siin karaa dheeraad ah haddii ay leeyihiin xirfadaha fiican ama waayo-aragnimo dheeraad ah oo duurka ku ay ka shaqeeyaan.
Qawaaniinta Takoorka dhiiri-shaqeeyayaasha inuu shaqaalayaal u kireeyo dadka ka soo jeeda kala duwan oo cid walba loo daweeyo isku mid. Waa sharci darro loo-shaqeeye si MA aad u kireeyo sababta oo ah:
Disability: dhibaato jireed ama jirro
Age: isagoo 40 ama ka weyn
asal Qaranka: meesha aad ka timid
Dhaawacyada dhici kartaa in aad inta aad ka shaqaynaysid. Haddii aad meeshaan ku dhaawacanto, halka ka shaqeeya, waxaa aad u muhiim ah inaad u sheegto maamulaha aad isla markiiba. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad hesho dhakhtar si loo daaweeyo dhaawaca. shaqaalaha’ sharciyada magdhow ilaalin kartaa xuquuqda aad u leedahay daawaynta. Qaar ka mid ah daaweyntaada iyo mushaarka la bixiyo karo by shirkadda.
Xaq u gaarka ah
Shirkadda Your looma ogola in ay eegaan waxyaabaha kuu gaarka ah. Your kiishad, bacaha, lookarrada keydinta, iyo boorsooyin waa adiga oo keliya, waayo,. Haddii aad hesho mail in magacaaga ayaa waxa on, Tababaraha aad looma ogola in ay u akhriyaan.
Haddii aad isticmaasho computer ah ee shaqada, aad Tababaraha loo ogol yahay in ay eegaan emails aad. Haddii aad isticmaasho telefoon, Shirkadaha qaar ka mid ah waxaa loo ogol yahay in ay dhegeystaan ​​taleefan iyo fariimaha aad. Tani waa kala duwan ee shirkadda kasta. marna waa in aad ku odhan ama wax ka qoraan waxyaabo xun oo ku saabsan shirkadda aad.
joojinta caddaalad darro
joojinta cadaalad darro ka dhigan tahay in aad helay eryay sabab sharci darro ah. Haddii aad u malaynayso in aad shaqo laga badiyay sababta oo ah takoor, dhaawac shaqada ah, ama dhibaataynta, waa in aad u malaynayso oo ku saabsan la hadashid qareen. Waxaa jira qareenada kuwaas oo caawiya dadka la workers'rights.
Haddii aad u malaynayso in wax sharci daro ah waxaa dhacaya in aad ka shaqeyso, shirkadda aad u shaqayso. Haddii loo-shaqeeyahaagu ma awoodo inuu ku caawiyo, qorto waxa dhacaya. laga yaabaa in aad u baahan tahay macluumaad this ka dib.
badbaadada goobta shaqada
Cidda aad u shaqayso waa in aad u hubiso in goobta ay tahay mid amaan ah oo aan khataraha. Khataraha jira waxyaabo wax idin yeeli kartaa, sida kiimikada ama qalab ammaan ahayn ama qalab. Mararka qaarkood, aad shaqo u baahan tahay in aad wax ka qaban ammaan ahayn. Tusaale ahaan, shaqaalaha dhismaha ah in laga yaabo inuu ku ordayaan, dhismayaasha dhaadheer. Under sharciga, shaqeeyayaasha leeyihiin in ay kuu sheegaan oo ku saabsan khataraha ka iman kara ee goobta shaqada. Sidoo kale waxay leeyihiin in ay aad u tababaraan luqad aad fahmi. Haddii aad dareento ama aad aragto wax khatar tahay in tababare uusan ogaato oo ku saabsan, u sheeg.
shaqaalaha’ xuquuqda dadka naafada ah
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sharciyada ku saabsan noocyada kala duwan ee takoorka shaqada
Macluumaad ku saabsan xuquuqda badbaadada goobta shaqada